Iinkqubo zeRubber Wheel | RayHaber | Uloliwe | Indlela enkulu | imoto cable
ikhayaHighwaySystems Wheel Wheel
Iindaba zeTroke Wheeled
Abaqhubi beZothutho loLuntu bahlangana eHall park; Imisebenzi yokuqhubela phambili yaququzelelwa liCandelo leCandelo lezoThutho loLuntu kwiCandelo leZothutho kuMasipala oMbhaxa. Isebe lezothutho kuMasipala oMbaxa weSakarya [More ...]
Ukuhambisa iPark, iParism isiguli somntu esinguAl Kwazaliseka
Ukuhambisa iPark, iParism isiguli somntu esinguAl Kwazalisekiswa; Omnye wabanxibelelanisi bakaMasipala weNqila yeKocaeli, iZothuthoPark A.Ş. , Isigulana esineminyaka eyi-22 se-autism esigulayo iphupha lika-Ali lokuba ngumqhubi lifezekisiwe. Ukuhamba iPark kuqala kulwandle ngokuthatha uAli endlwini yakhe ngebhasi. [More ...]
Uqeqesho lwaBaqhubi beNqila yeKocaeli; UMasipala waseKocaeli Metropolitan iSebe lezoThutho kunye noLawulo lweeTrafikhi kwindawo yezothutho lukawonke-wonke ophethe iTransportPark Inc. umqhubi we581 oqhuba 'uqeqesho loMqhubi weZothutho loLuntu' uya kunikwa. [More ...]
UMongameli uYılmaz ubambe isithembiso sakhe 200 S IPlate iya kuthengiswa ngeThenda; U-Balikesir USodolophu u-Yucel Yilmaz, uthembisa ukugcina izithembiso zonyulo kubahwebi. UMasipala oMbaxa waseBalıkesir kwiphondo liphela [More ...]
Yacwangciswa yi-IMM 'iSixeko saseWorkshop' yabanjwa; Indawo yokusebenzela ye-Smart City enilungiselelwe liCandelo I-Istanbul Metropolitan kaMasipala (i-IMM) yeCandelo loLawulo lweeComputer lweCandelo le-Smart City [More ...]
I-EGO yokufumana i-10 uMqhubi weBhasi yesiThuthi yoThutho lukaRhulumente; UMasipala oMbaxa we-Ankara Metropolitan I-EGO Jikelele yavula uvavanyo ukuze kuqashwe umqhubi webhasi yabasetyhini i-10 kwizithuthi zokuhamba zikawonkewonke. Kwi-EGO yengqesho [More ...]
Ukufikelela okukhulu kuBafundi e-Ankara; UMansur Yavaş, uSodolophu kaMasipala wase-Ankara Metropolitan, uyaqhubeka nokuphumeza izicelo ezenza ukuba kube lula ukuba abafundi kwidolophu elikomkhulu. Yaphehlelelwa okokuqala e-Ankara ngomyalelo kaMongameli uYavaş kunye nomda wobudala yayiyiyo [More ...]
UMasipala weNqila ye-Ankara Çubuk iZiko loBomi boSapho, i-81. Ngaphakathi kwisithuba seveki yokuzikhumbula, i-Tanışma Dibana neTandem yeebhayikhi ”, eyaziwa njengebhayisikile yabantu ababini e-Çubuk. Ixesha lokuqala ukukhwela iibhayisikile zetandem [More ...]
Ukubulawa kweentsholongwane kwiiBhasi zikaMasipala eTranzon; Ngelixa ukucocwa ngaphakathi kunye nangaphandle kweebhasi ezibonelela ngeenkonzo zothutho lukawonkewonke kwenziwa rhoqo ngaphakathi kuMasipala weDolophu yaseTrabzon, imiyalelo kaSodolophu wase-Metropolitan uMurat Zorluoğlu [More ...]
Umyalezo onentsingiselo osuka kuBantwana ukuya esikolweni ngebhayisekile! 'Ungayitshisi i-Petroli, Ioyise ioyile!'; Umasipala wase-ropzmir Metropolitan uyaqhubeka nephulo lakhe elithi “Masiye esikolweni ngabantwana iBisiklet. Emva kwabafundi baseMathoiehir Eraslan College Karşıyaka Abafundi beSikolo i-Evin Leblebicioğlu Sekondari [More ...]
Umsebenzi wesine ogqityiweyo eAltınyol
Umsebenzi wesine ohambileyo eAltınyol ugqithile; Umsebenzi wendlela e-Altinyol, enye yezona zinto ziphambili ze-Izmir, ezivezwa kakhulu kukugcwala kweemoto, uphelile. Ukucuthwa kwengxinano yezithuthi ngenxa yomgaqo wesine okongezwa kwidatha yokuqala [More ...]